ဇွန်လရဲ့ ပရီးမီးယားလိဂ် အကောင်းဆုံး နည်းပြ ဆန်ကာတင် (၄) ဦး၊ ဘယ်သူရမလဲ…? – MySport Myanmar
ဇွန်လရဲ့ ပရီးမီးယားလိဂ် အကောင်းဆုံး နည်းပြ ဆန်ကာတင် (၄) ဦး၊ ဘယ်သူရမလဲ…?
ပရီးမီးယားလိဂ် ပြိုင်ပွဲဟာ ကိုရိုနာ ဗိုင်းရပ် ရောဂါကြောင့် (၃) လခန့်ကြာ ရပ်နားခဲ့ရပြီးတဲ့နောက် မတ်လမှာ ပြန်လည် စတင်ခဲ့ပေမယ့်လည်း မတ်လမှာ ပရီးမီးယားလိဂ် တစ်လတာ အကောင်းဆုံး နည်းပြဆုကို မပေးခဲ့ဘဲ ယခုလမှာ မတ်လ နဲ့ ဇွန်လကို ပေါင်းပြီး ပေးအပ်သွားမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အင်္ဂလန် ပရီးမီးယားလိဂ် ပြိုင်ပွဲဟာ ပြန်လည် စတင်တဲ့ အချိန်မှာ ကွင်းပိတ်ကစားရတာကြောင့် ပွဲကြည့်ပရိသတ်တွေ မရှိခဲ့ပေမယ့်လည်း အရင်ကတိုင်း လူကြိုက်အများဆုံး လိဂ်ပြိုင်ပွဲ အဖြစ်နဲ့ ဆက်လက် ရပ်တည်နိုင်ခဲ့ပြီး မတ်လ နဲ့ ဇွန်လအတွင်းမှာ ပြိုင်ဆိုင်မှု ပြင်းထန်ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
မတ်လ နဲ့ ဇွန်လအတွင်းမှာ ကစားခဲ့တဲ့ ပရီးမီးယားလိဂ် ပွဲစဉ်တွေဟာ ပရီးမီးယားလဂ် ချန်ပီယံကို အဆုံးအဖြတ်ပေးခဲ့တဲ့ ပွဲစဉ်တွေ ဖြစ်တာကြောင့် ပြိုင်ဆိုင်မှု ပြင်းထန်ခဲ့ပြီး အသင်း နည်းပြတွေရဲ့ ကစားသမား အသုံးပြုမှု နဲ့ ကစားကွက် ပြောင်းလဲအသုံးမှုက အလွန် အရေးပါးခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ မတ်လ နဲ့ ဇွန်လအတွက် အကောင်းဆုံး နည်းပြ ဆန်ကာတင် စာရင်းမှာ နယူးကာဆယ်အသင်းရဲ့ နည်းပြ စတီ ဘရု့စ်၊ ဝုဗ်လ်အသင်းရဲ့နည်းပြ နူနို ဆန်းတို့စ်၊ ချဲလ်ဆီးအသင်းရဲ့ နည်းပြ လမ်းပတ် နဲ့ မန်ယူအသင်းရဲ့ နည်းပြ ဆိုးလ်ရှား၊ စသဖြင့် ပရီးမီးယားလိဂ် နည်းပြ (၄) ယောက် ဖြစ်ကြပါတယ်။
ဆန်ကာတင် စာရင်းမှာ ပါဝင်ကြတဲ့ နည်းပြ (၄) ဦးဟာ ဇွန်လအတွင်း ကစားခဲ့တဲ့ ပရီးမီးယားလိဂ် ပွဲစဉ်တွေမှာ ရှုံးပွဲ တစ်ပွဲမှ မရှိအောင် စွမ်းဆောင်ထားနိုင်ခဲ့ကြပြီး နည်းပြ (၃) ဦးရဲ့ အသင်းတွေက လက်ရှိမှာ ချန်ပီယံလိဂ် ဝင်ခွင့် ရရှိဖို့ အချင်းချင်း တိုက်ပွဲဝင်နေကြတဲ့ အသင်းတွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ပရီးမီးယားလိဂ် အမှတ်ပေး ပြိုင်ပွဲမှာ နည်းပြ လမ်းပတ်ရဲ့ ချဲလ်ဆီးအသင်း၊ နည်းပြ ဆိုးလ်ရှားရဲ့ မန်ယူအသင်း နဲ့ နည်းပြ နူနိုရဲ့ ဝုဗ်လ်အသင်းဟာ အဆင့် (၄) နေရာအတွင်း ဝင်ခွင့်ရရှိဖို့အတွက် တိုက်ပွဲဝင်နေကြရပြီး လက်ရှိမှာတော့ ချဲလ်ဆီးအသင်းက အဆင့် (၄) နေရာကို ရရှိထားပါတယ်။ ချဲလ်ဆီးအသင်းဟာ ရမှတ် (၅၄) မှတ် ရရှိထားပြီး အဆင့် (၅) နေရာက မန်ယူအသင်း နဲ့ အဆင့် (၆) နေရာက ဝုဗ်လ်အသင်းကို ရမှတ် (၂) မှတ်သာ ဖြတ်ထားတာကြောင့် တစ်ပွဲ ရှုံးနိမ့်မယ်ဆိုရင် အဆင့် (၄) နေရာကနေ ဖယ်ပေးရဖွယ် ရှိပြီး ချန်ပီယံလိဂ် ဝင်ခွင့် ပြိုင်ဆိုင်မှု ပြင်းထန်နေပါတယ်။
MySport Myanmar2020-07-03T20:56:38+06:30July 3rd, 2020|Football, News, Premier League|